Fiovàn’ny Kolontsaina Fampakarambady Bangladeshi Midika Ihany Koa Ho Fiovàna Amin’ny Karazan-Tsakafo Aroso · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2018 18:02 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, Español, فارسی, 日本語, русский, polski, हिन्दी, नेपाली, Türkçe, Português, عربي, srpski, বাংলা
Ny ampakarina sy ny mpampakatra, maka sary mandritra ny fampakarambady. Sary an'i Sanim Haque. Nahazoana alàlana
Desambra hatramin'ny Janoary no fotona fampakarambady ao Bangladesh raha ny mahazatra, amin'ilay maha-tonitony kokoa ny maripàna. Ny lisitra sakafo fandroso dia ahitàna ny Pulau, Biryani, Akoho voaendy, Korma, Kebab, Rezala sy Borhani ankoatry ny hafa. Ny tsindrin-tsakafo mamy dia ahitàna ny habobo nomamiana, Payesh, Jorda ary karazanà sakafo mamy isankarazany. Rehefa tonga ao amin'ny fampakarambady ny mpampakatra, dia tsenaina amin'ny vatomamy sy sorbet.
Hatramin'ny taompolo vitsy lasa izay, efa nahazatra ny fampakarambady karakaraina anaty toerana ao an-tanàna ihany na eo amin'ny manodidina, ary ny fianakaviana sy ny namana no mifandrimbona amin'ny fandrosoana sakafo. Amin'izao androntsika izao, nikisaka ny toerana ka lasa any amin'ireo foibenà vondrom-piarahamonina sy ireo trano malalaka hafa izay ireo matianina amin'ny resaka sakafo sy ireo ‘chef’ mpahay izany manokana no mikarakara ny sakafo. Mahatsiaro ny fahazazàny ilay mpanoratra tantara foronina sady mpanao gazety, Iraj Ahmed :
Amin'ireny andro ireny, mety hilaza ny olona hoe fomba ratsy ny mandroso sakafo nokarakarain'ny vahiny, kanefa, ankehitriny toa efa maka volonandro manaraka ny zavamisy sy ny vanimpotoana ny olona. Siddhratha Mukhopaddhay avy any Bengal andrefana, ao Indiano manoratra momba ireo fiovàna hita anatin'ny fampakarambady Bengali:
Miaraka amin'ny fiovàna'ny kolontsain'ny fampakarambady, nisy fiovàna ny karazany hita any anatin'ny sakafo aroso amin'ny fampakarambady ao anatin'ny haify Bangladeshi. Tany aloha tany, sakafo tsotra toy ny Pulau arahana akoho natono, ondry be laro rezala (curry), hena omby nendasina, Tikia (hena ondry nofiraina manify tsara), salady misy tabia sy kôkômbira ary borhani, ary tsindrin-tsakafo toy ny jorda na pudding vita tamin'ny vary no nahazatra. Ankehitriny betsaka sakafo isankarazany sy sakafo matsiro toy ny Biryani, haify Mughal, no safidy miha-mitombo ho ao anaty lisitry ny sakafo.
Tolorana vatomamy eo am-pahatongavana ny mpampakatra. Sary an'i Sanim Haque. Nahazoana alàlana.
Voaroso sakafo ny mpampakatra. Sary an'i Sanim Haque. Nahazoana alàlana
Nahazatra ny nahita ity sakafo malaza ity aroso saika mandritra ireo fampakarambady Bengali. Vita avy amin'ny vary mani-pofona (Basmati, chinigura sns.) asiana tongolobe, sakay maitso, pitipoà, ary ghee ny Pulau Tokambolo ary indraindray misy fanampiny hafa. Aroso miaraka amin'ny tononkena sy curry (sarahana anaty lovia samihafa).
Pulau Tokambolo – vary tsotra nolaroina zavamanitra sy tsiro. Sary an'i Sanim Haque. Nahazoana alàlana
Efa lasa fenitra izao ny fandrosoana Biryani, sakafo Aziatika Tatsimo ifangaroan'ny vary. Ireo zavamanitra, vary mani-pofona, hena (akoho, ondry, omby na trondro), Ghee (avy nohalefahana) ary laro hafa no ampifanaingenina sy miaraka andrahoina mba hanamboarana ny Biryani. Tsy toy ny Pulau (izay hanina miaraka amin'ny tononkena sy curry), fa sakafo feno misy hena sy zavamanitra (sy legioma) ao anatiny ny Biryani.
Mutton Rezala dia sakafo misy curry manana ny fiaviany avy any Bengal, nokarakaraina avy amin'ny ondry sy legioma. Aroso miaraka amin'ny vary na Pulau.
Rezala, midika hoe ondry malefaka ambony saosy. Ho tsaroanao mandritry ny fotona ela ny tsirony. Io no iray amin'ireo endrika mahazatra ao anaty lisitry ny sakafo amin'ny fampakarambady Bangladeshi. Sary an'i Sanim Haque. Nahazoana alàlana.
Sakafo iray hafa mahazatra amin'ny fampakaramnìbady Bangladeshi ny akoho natono. Sary an'i Sanim Haque. Nahazoana alàlana.
Tikia dia matetika no hanina miaraka amin'ny Pulau na Biryani. Araka izany, mandeha ho azy ny fisafidianana azy ho anaty lisitra rehefa fampakarambady.
Tikia, sakafo iray mahazatra rehefa fampakarambady. Sary an'i Sanim Haque. Nahazoana alàlana
Borhani dia zavapisotro anafangaroana ny yogurt (iaorta) aminà ravina maitso nopotehana, dipoavatra, sakay maitso ary rano. Manampy amin'ny fandevonana ireo sakafo mavesatra naroso nandritra ny fampakarambady.
Vary Jorda, fantatra amin'ny maha-tsindrin-tsakafo mamy azy rehefa fampakarambady.
Paan, fikarakarana sakafo iray anafangaroana ny ravina betela amin'ny voanà areca, ravim-paraky sy tsiro hafa.